January 2018 - Shop
Shop > All Articles > 2018 > January
Celebrity Inspired Outfits That Can Slay Your Valentine’s Day0360
Valentine’s day is coming, and everyone is planning to spend time with significant others. It is the time to buy …
Valentine’s Day နေ့ကို Gigi Hadid၊ Kendall Jenner တို့ကဲ့သို့ဖြတ်သန်းချင်ပါသလား။0316
The KaungHtet January 31, 2018 3:32 am May 3, 2018
Valentine’s day နေ့ကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူတွေကလဲဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာသွားပြီး ဒီနေ့ကိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာကိုကြိုစဉ်းစားနေကြပြီ။ ချစ်သူကိုဘယ်လိုsurprise လုပ်ရမလဲကိုလည်းရင်ခုန်စွာ နဲ့ကြိုပြီးတွေးနေကြပြီ။တချို့တွေကချောကလတ်တွေတောင် ဝယ်စုနေပြီးလောက်ပါပြီ။ဒီလိုနေ့မှာ မိန်းကလေးတွေအများဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်ခဲဆုံးပြသာနာကတော့ Valentine’s dayမှာဘယ်လိုမျိုးအလှဆုံးဝတ်ရမလဲဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အလှဆုံးအဝတ်အစားတွေဆိုတာလည်း အဲ့နေ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ေ တ်ာတော်ကိုအဆင်မပြေဘူးလို့ မြင်လာပြီးမကြိုက်တော့တာတွေရှိပါတယ်။
It’s OK to Not Look Like Everyone Else. Be weird.0349
The KaungHtet January 28, 2018 5:55 pm May 3, 2018
Have you ever wanted to explore the unique color of lip makeup? Sometimes, wearing red and pink make you bored …
နုတ်ခမ်းနီအရောင်ဆန်းတွေကိုဆိုးဖို့ တွန့်ဆုတ်နေပါသလား။0342
ထူးခြားတဲ့နုတ်ခမ်းနီအရောင်ကို ဆိုးကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါသလား။ တခါတလေကျရင် အနီရောင်၊ ပန်းရောင်တွေကိုပဲ ဆိုးရတာ့ ငြီးငွေ့တက်ကျပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ အရောင်တောက်တောက်နဲ့ သာမန်လူတွေနုတ်ခမ်းထက်မှာ အလွယ်တကူမတွေ့နိုင်တဲ့ နုတ်ခမ်းနီမျိုးကို ဆိုးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။နုတ်ခမ်းနီသရဲမလေးတွေအတွက်တော့ ဒီလိုအရောင်တောက်တောက်နုတ်ခမ်းနီ အရောင်ကမဆန်းကြယ်ပါဘူး။ ဘဝတလျှောက်လုံးကိုဒီလိုနုတ်ခမ်းနီအရောင်ပဲဆိုးသွားဖို့ တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ဘဲ တခါတလေကျရင် ဒီလိုအဆန်းတကြယ်အရောင်တွေကိုဆိုးကြည့်တာက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီး …
It’s Time to Find Out How Much You Know About “Lip Makeup” – 2.00357
The KaungHtet January 28, 2018 5:29 pm May 3, 2018
We have already mentioned half of the lip makeup types in the previous blog. We promised ourselves we will come …
နုတ်ခမ်းနီ အကြောင်းဘယ်လောက်သိပါသလဲ။ – အပိုင်း (၂)0364
နုတ်ခမ်းနီအကြောင်း ပထမပိုင်းကို ဒီလင့် “နုတ်ခမ်းနီအကြောင်းဘယ်လောက်သိပါသလဲ။” လေးမှာ ပြောပြပြီးသွားပါပြီနော်။ အခုဆက်လက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း သော ကျန်နေသေးတဲ့နုတ်ခမ်းနီလေးများ အကြောင်းကို ဆက်လက်ပြောပြပါရစေ။
It’s Time to Find Out How Much You Know About “Lip Makeup”0358
The KaungHtet January 28, 2018 4:56 pm May 3, 2018
Lip is awarded as one of the sexiest parts of the body. We kissed with them. We created the unforgettable …
နုတ်ခမ်းနီ အကြောင်းဘယ်လောက်သိပါသလဲ။0527
The KaungHtet January 28, 2018 4:55 pm May 3, 2018
နုတ်ခမ်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအပိုင်းများထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်။ မမေ့နိုင်တဲ့အတိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ စွဲမတ်စရာကောင်းတဲ့ အနမ်းတွေဖန်တီးတယ်။ အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အပြုံးတွေကိုဖန်ဆင်းကြတယ်။ ဒီလို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အရာကို Lip balm၊ matte၊ gloss စတဲ့နုတ်ခမ်းနီ အမျိုးအစားတွေ အသုံးပြုပြီး ဒီ့ထက် …
Keep His fixation On Your Lips for 7.3 seconds with Red Lipstick0325
The KaungHtet January 26, 2018 5:53 am August 9, 2018
Red lipstick is the weapon to update our look instantly. Scientists from Manchester University madearesearch that involved tracking …
Crush ၏ ၇.၃ စက္ကန့်လောက် အာရုံစိုက်မှုကို နူတ်ခမ်းအနီရောင်ဖြင့်ရယူလိုက်ပါ။0324
The KaungHtet January 26, 2018 5:53 am May 3, 2018
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ နူတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများက ပိုပြီး အာရုံစိုက်မှုရှိကြ ပြီး၆.၇စက္ကန့်လောက် အမျိုးသားများက ပန်းရောင်နူတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့သူများကို အာရုံစိုက်မှုရှိပြီးအနီရောင်က တော့ ၇.၃ စက္ကန့်ထိတောင်အာရုံစိုက်ခံရပါတယ်။၇.၃ စက္ကန့်စာလောက်သင့်နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးပေါ်ကနေ သူ့မျက်ဝန်းတွေမလွန်ဆန်နိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်ကျန်တဲ့သင့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာဖို့ဆိုတာက တကူးတက ကြိုးစားစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။အနီရောင် နူတ်ခမ်းနီ ကမျက်နှာအလှကို ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ …
သငျဟာ မိတျကပျတှအေကွောငျးစိတျဝငျစားတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ ဒီမေးခှနျးတှကေိုဖွကွေညျ့လိုကျပါဦး? 2735